आगोले ज’लेर आमा-छोराको बे’हाल, खर्च अभावमा उपचार हुन सकेन
Homeसमाचारआगोले ज’लेर आमा-छोराको बे’हाल, खर्च अभावमा उपचार हुन सकेन
March 14, 2021 admin समाचार 6561
जिल्लाको घोडा’घोडी नगरपालिका वडा नं ७ करैचामा आगोमा प’री ज’लेकी अल्पना चौधरी र उनका डेढ बर्षिय छोरा आरएन चौधरी उपचार नपाएर छट्प’टाइरहेका छन् । गत पुस १३ गतेका दिन २७ वर्षीया अल्पना आफ्नै घरभित्र दाउरामा बोलेको आगो ताप्दै आफ्ना डेढ बर्षिय छोरा आरएनलाई काखमा राखेर दूध खुवा’उदै थिइन् । त्यसै बेला उनलाई एक्का’सि मृगी (छारे रोग) भयो । अल्पना बे’होस भएर ताप्दै गरेको आगोमाथि ढ’लिन् ।
दाउरामा दन्द’नी बलि’रहेको आगोमाथि उनी एक्लै मात्र ढ’लिनन, डेढ बर्षिय काखे बालक पनि आमासँगै आ’गोमा घो’प्टिए । आरएनमाथि मृगी रोगले स’मात्दा बेहो’स भएकी आमा अल्पना घो’प्टिइन् र आरएन बलिरहेको आगोमा आमाको शरीरले दा’बिए । आरएनले टाउकोमा लगाएको टोपीमा आगोले समा’त्यो र दन्द’नी ब’ल्न थाल्यो ।
उनी होस न बेहो’स गरेर रुन थाले । आमा अल्पना आफै बेहो’स भएर आगोमा नाबालक छोरासहित ढले’की थिइन् । उनलाई न त आफ्नो शरीरका कपडामा आगो स’ल्किएको थाहा भयो न त छोरा आरएनको अवस्था बा’रेमा नै । दन्द’नी बलेको आगोको पीडा स’हन नस’की रुदारुदै छोरा पनि बे’होस भयो ।
वरिपरि उनीहरुको पीडा देख्ने वा छोरा रोएको सुन्नेस’म्म कोही थिएन । चौधरी समाज रहेको टोलको उनको पल्लो घरमा छिमेकी बि’तेका हुँदा सबै जना गाउँले जम्मा भएर रातीको १० बजे श्रा’द्धेको खानपनिमा व्यस्त थिए । चौधरी समाजमा श्रा’द्धे गर्दा सबै नजिकका गाउँले जम्मा भएर बं’गुर मा’रेर खाने प्रच’लन छ ।
अल्पना पनि त्यो भोजमा सह’भागी थिइन् तर आफ्नो बच्चा सानो छ, घरमा गएर आगो ता’प्छु भन्दै चाँडै फर्किइन् । उनको घरमा सासु, आमा, श्रीमान्, आफु र डेढ बर्षिया छोरा बस्दै आएका थिए । उनका सासु (आमा) र श्रीमान समेत घरबाट करिब तीन चार सय मिटरको दुरीमा रहेको छिमेकीको घरमा श्रा’द्धेको भो’ज खान गएका थिए ।
पछि नजिकका कसैले बच्चा रोए’को सुनी घरका मान्छेलाई बोला’एको तर कोही नबो’लेपछि ढोका खोलेर भित्र पस्दा घट’ना थाहा पाएका रहेछन् । ती गाउँले भित्र पस्दा आमाछोरा नै आगोले ज’लेर हेर्नैै न’सक्ने आवस्थामा पुगेको देखे ।
उनले हतार–हता’रमा आगोबाट बाहिर नि’काले र आत्तिँ’दै भोज चलिरहेको घरमा पुगे । अनि अल्पनाका परिवार र अन्य गाउँलेलाई बोलाएर घट’नास्थलमा फकिए । घट’ना निक्कै हि’र्दयविदा’रक थियो । उनको उपचारको लागी चाँडै अस्पताल लैजाने नि’र्णय गरेर सुखडस्थित घोडाघोडी अस्पतालमा पु¥याए । उनको त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने भनेपछि नेपालगञ्ज मेडिकल क’लेजमा लगियो । त्यहाँ समेत उ’पचार हुन सकेन ।
पैसाको अभा’वमा उपचार हुन सकेन
पैसा नहुँदा थपा उपचाको लागि उनको परिवारले काठमाण्डौ लग्न सक्ने अव’स्था पनि थिएन । उनका आफन्तले घर फर्का’एर ल्याए । केही दिनपछि ध’नगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल लगियो । त्यहाँ पनि उनको उपचार हुन न’सक्ने भन्दै काठमाडाैँ जान भनियाे । तर पैसा नहुँदा अहिले उनी घरमै आगोले पोलेको त्यो पी’डासँग ल’ड्दै छन् ।
अल्पनाका छिमेकी फुलमतीले उप’चारमा सहयोगको लागि विभिन्न ठाउँमा धा’ईन् । तर कसैले सहयोग न’गेरन् । डेढ वर्षिया नाबा’लक आरएनको टाउको र २७ बर्षिया आमा अल्पनाका जलेको दुईओटै हात कु’हिनो भन्दा तल पुरै पाकेर दुर्ग’न्ध आएको छ । तर स्थानीय वडा कार्यालयले ७ हजार नगद सहयोगभन्दा बाहेका अन्य केही गरेन । यसबाहेक अरू कुनै ठाउँबाट सहयोग प्राप्त नभ’एको उनकी सासु हुक्नी देवी चौधरीले बताईन् ।
आर्थिक अवस्था निक्कै दय’नीय भएका का’रण घटनाको ३ महिना बितिसक्दा समेत उपचार न’पाउँदा आमा र छोरा दुवै पीडामय दिनहरू बिताइरहेछन् । उनका श्रीमान दैनिक ज्याला-मज’दुरी गर्छन् । आम्दानीको अन्य कुनै श्रोत छैन् वि’पन्न त्यो परिवारको कतै पहु’च पनि छैन ।
बुहारी र नाति दुवै जना आगोमा ज’लेको र उपचार गर्ने पैसा नहुँदा निक्कै पि’डा भईरहेको अल्पनाकी सासु हुक्नी देवी चौधरीले बताईन् । गाउँभरमा ऋण नि’कालेर डेढ लाख बुहारी र नानीको उपचारमा खर्च गरेको बता’उँदै त्यो भन्दा बढी ऋण समेत नपाए’कोले उपचार खर्च गर्न जुटा’उन नसकेको हुक्नीकाे भनाइ छ ।
आफूहरूले धनगढी, नेपालगञ्ज लगायतका विभि’न्न स्थानमा उपचारको लागि लग्दा अस्पतालहरुले पहिला पैसा जम्मा गर्नु’पर्ने भन्दै भर्ना नै नलि’एको अल्पनाकी छिमेकी फूलमती चौधरीले बताईन् । काठमाडाैँमा रहेको कीर्तिपुर अस्पतालमा लग्दा समे’त पहिला ७ लाख जम्मा गरेपछि मात्र उ’पचार सुरु हुने बताएपछि उनीहरुका आफन्तले बा’ध्य भएर घर फर्का’इल्याएको फुलमतीकाे भनाइ छ ।
उपचारमा सहयोग गरिदिनका लागि विभिन्न जनप्र’तिनिधिहरुलाई आग्रह गर्दा कसैले नसुनेको र अवस्था हे’रीदिन आग्र’ह गर्दा समेत कोही नआएको उनको गुनो’सो छ । यस्तै आफूलाई मृगी भएर आगोमा पल्टँदा आमा-छोराले नै दु:ख खे’पिरहेको र पैसा नभ’एकोले कसैले उपचार नगरिदिएको पि’डीत अल्पना चौधरीले बताईन । शरीर पुरै रातदिन पोल्ने गरेकोले स’हनै गाह्रो हुने गरेको उनकाे भनाइ छ । बच्चा पनि पीडा सहन नसकेर राे’इरहने गर्छ ।
यता, घोडाघोडी नगरपालिका वा.न. ७ का वडाध्यक्ष धनबहादुर बमले वडा कार्याल’यसँग सहयोग गर्न सक्ने अवस्था न’रहेको र आफुले सहयोगको लागि नगरपालिकालाई सिफा’रिस गर्नुको साथै मौखिक आ’ग्रह गर्दा समेत मे’यरले सहयोग नगरेको आरो’प लगाउनुभयो ।
पहुँचवालाहरुले राज्यकाेषबाट उप’चार गर्न सक्ने अवस्था छँदैछ । नेताहरू राज्यकोषको ढुकु’टीबाट लाखौँको रकम खर्च गरेर महं’गा अस्पतालहरुमा अनि विदेश गएर उप’चार गरिरहेका छन् । हेलिकप्टर चार्टर गरेर समेत उपचारको लागी अस्पतालसम्म उनीहरु जाने गर्दछन् । तर नागरिकहरूकाे जीवन यसरी उप’चार न’पाएर सड्नु’परेकाे छ । पीडितका परिवारले उपचारका लागि सहयाेग गरि’दिन अहिले पनि याच’ना गरिरहेका छन् । – न्यूज24 बाट
कन्चन र अनिशा प्र’करण १ लाखको कस्तो सेटिङ? भयो भ,न्डाफोर,अब के होला ? (भि’डियो सहित)
जापान पठाइदिन्छु भन्दै, करोडौँ ठग्ने कमला समातिइन् (भिडियो सहित)
April 1, 2021 admin समाचार 6045
काठमाडौं ‘फुलबुट्टे सारी’ गाएकी यु’गान्डाकी गायिका दे क्वाप्टेन वियोन्स फ’मासीलेले मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई भेट गरेकी छन् । गीतको लेजेन्डरी भर्सन गायका गायक तथा कलाकार मदन’कृष्ण श्रेष्ठले गीत गाएको सुने पछि मदनकृष्ण’लाई भेट्न मन लागेको र त्यो
रौतहटमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पु’तला दह’न
May 23, 2021 admin समाचार 5210
रौतहटमा राष्ट्रपति वि’द्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला द’हन गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको विरो’धमा जसपा उपेन्द्र समूह र माओवादी का’र्यकर्ताहरूले पुतला दहन गरेका हुन् । जसपा प्रदेश
साढे २ रुपै’याँ पर्ने मास्कलाई १० रुपैयाँमा बि’क्री
May 4, 2021 admin समाचार 5215
कोभिडको मौका छोपी सर्जि’कल सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूले मास्क’मा अनुचित मूल्य लिएपछि सरकारले का’रबाही थालेको छ । अनुगमनका क्र’ममा कम्पनीहरूले प्रतिपिस मास्क २ रुपैयाँ ४ पैसामा होलसे’ललाई बिक्री गरेको पाइएको छ । तर सोही मास्क